PVC na-akpaghị aka na-emeghe ụzọ maka ụlọ nkwakọba China Manufacturer
Nkọwa:PVC na-emepụta ụzọ ntanetị,PVC Roller Shutter Doors,Ụlọ PVC Roller Shutter Ọnụ Ụzọ
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > PVC High Speed ​​Door > PVC na-akpaghị aka na-emeghe ụzọ maka ụlọ nkwakọba
Ihe Nlereanya.: HS-003
Ulo onyonyo PVC na-ekpuchi ọnụ ụzọ dị iche iche na igbe mkpuchi, igbe nchịkwa, bọmbụ ígwè, okporo ígwè na-eduzi, na-eme ka onye na-arụ ọrụ ike, foto pvc, ihe ntanetị mkpụrụ ndụ na ihe radar na ihe ndị ọzọ. Enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ ihe oriri, ụlọ ọrụ na-emepụta kemịkal, textile, refrigeration, na-ede akwụkwọ, mgbakọ, ngwa ngwa na ihe ndị ọzọ.
Onu oghere nwere ike mepee ọnụ ụzọ ahụ, eriri ụdọ, njedebe dị n'ime ime, bọtịnụ magnetik, foto, cell na radar sensor.
1. Nhazi usoro Japan Mitsubishi Inverter, PLC, usoro nhazi servo na ihe ndị ọzọ.
2. Usoro di omimi Na-akwado ezigbo mpelata ụgbọ elu dị elu, 0.75-2.2KW, dị ka ọnụ ụzọ ahụ si dị họrọ ụdị. Nhọrọ abụọ maka nhọrọ, SNMA ma ọ bụ SEW.
3. Ime ụlọ --Doorframe jiri akwụkwọ nchara oyi nke Shanghai Baosteel, 2mm thickness, paint under conditions of high temperature and stic-free, color optional. --Nwe ihe onwunwe na-etinye akwa mkpuchi ụlọ ọrụ dị elu, 0.8mm thickness, yellow, blue, red, white, orange and other color for selection. --Itughari nke a na-eji kpoo pve kpochapu si Japan, nha na ebe dika iwu gi.
4. Ụzọ mepere emepe Radar / ụwa induction / nchịkwa nchịkwa / eriri eriri / akwụkwọ ntuziaka.
5. Mpaghara ndị dị mma Ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ, ụgbọ epeepe, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nri, nkesa, ngwa ngwa, ụlọ ahịa oyi & refrigerators
Shenzhen Hongfa Automatic Co, .Ltd bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na-etinye aka na mmepe nke ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ na-emepe nke ụwa. Ihe ndị anyị na-emepụta gụnyere ọnụ ụzọ na-agbanwe ngwa ngwa, ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ ọrụ, ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, PVC
ọnụ ụzọ na-agbagharị, ọnụ ụzọ na-agagharị ngwa ngwa, ọkụ na-eguzogide ọnụ ụzọ mpempe akwụkwọ, ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ, ọnụ ụzọ ntinye mpempe, ọnụ ụzọ mgbochi,
PVC High Speed ​​Door Kpọtụrụ ugbu a
2019 Elu Ọnụ Ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Okwute PVC na-adọkpụ na-adọkpụ Kpọtụrụ ugbu a
PVC mkpuchi akwa ọsọ Roller shutter ọnụ ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
PVC Rolling Door dị elu Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ PVC Dị Elu Kpọtụrụ ugbu a
PVC High Speed ​​Roller Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
PVC Fast Rolling Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
PVC na-emepụta ụzọ ntanetị PVC Roller Shutter Doors Ụlọ PVC Roller Shutter Ọnụ Ụzọ Ulo na-ahụ maka ụlọ ntanetị Na-echekwa ụlọ ntanetị Njikwa na-arụ ọrụ ntanetị Ihe na-emepụta ihe na-eme ihe ntanetị PVC na-emechi ọnụ ụzọ maka Ngwuputa